एनआरएनए नवौ बिश्व सम्मेलनस्थल हायात होटलमा तोडफोड, थप सुरक्षाकर्मी खटाईयो, निर्वाचन अनिश्चित - VOICE OF NEPAL
२९ आश्विन २०७६, बुधबार १४:४२
450 ??? ???????
एनआरएनए को नवौ बिश्व सम्मेलनस्थल हायात होटेलमा एनआरएनहरुले तोडफोड गरेका छन्। तोडफोडबाट कयौ फर्निचरहरु भाचिएका छन् भने स्थिति सामान्य गर्न सुरक्षाकर्मी थपिएको छ।
निर्वाचन समयमै हुन नसकेको र मतदाता प्रतिनिधिमा धाधली भएको भन्दै संघको नवौ बिश्व सम्मेलनमा प्रवासबाट नेपाल गएका डिलिगेटहरूले तोडफोड गरेका हुन्। कार्यक्रमस्थल हायात होटेल अहिले सुरक्षाको कडा निगरानीमा छ।
एनआरएनएको नवौ बिश्व सम्मेलनमा अध्यक्ष पदमा कुल आचार्य र कुमार पन्तको बिचमा निकै रस्साकस्सी चलिरहेको छ। अध्यक्ष पदका दुवै प्रत्यासीहरुले आफुले जम्मा गरेको भिड सम्हान नसक्दा यो अवस्था आएको प्रतक्ष्यदर्शी डिलीगेटहरुको आरोप छ।
प्रावासमा सिकेको ज्ञान र सीपलाई नेपालमा लगानी गर्ने भनेर गफ हाक्ने एनआरएन नेताहरुको यो बहिगत, अनुशासनहिनता र हबिगत देखेर कयौ डिलिगेटहरु दिक्क भएका छन्। एनआरएन भित्र बढ्दै गएको गुण्डागर्दी, अनुशासनहिनता र अपारदर्शिताले गर्दा नै संघप्रति आम सर्वसाधारण प्रवासी नेपालीहरुको बितृष्णा बढ्दो छ।
एनआरएनहरुको यस्तै गतिविधिहरुले नेपालमा कस्तो ज्ञान र सिप लगानी गर्ने हुन् , त्यो हेर्न भने बाँकी नै छ !